C.ronaldo oo 6 isbuuc kahor Sir Alex ku sir qarsaday inuu ka tegayo Madrid | TOP NEWS
C.ronaldo oo 6 isbuuc kahor Sir Alex ku sir qarsaday inuu ka tegayo Madrid
Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu ku sir qarsaday tababarihiisii hore ee Man United, wuxuuna u caddeeyey in uusan ku faraxsaneyn joogista kooxda ka dhisan Santiago Bernabeu Stadium, waana ka hor inta aysan saxaafaddu ogaan in loo heysto eedeymo la xiriira inuu lacago canshuur ah ka lunsaday dowladda Spain.
Ronaldo iyo Ferguson, oo ka tirsan agaasinka Man Utd, ayaa markasta ah laba shaqsi oo aad isugu dhow, inkastoo uu xiddigaani 2009kii ka tegay Man United markaasoo uu heshiis 80 milyan oo ginni ah ugu wareegay Real Madrid.
Ronaldo ayaa xitaa dhowr daqiiqo la sheekeystay Ferguson markii ay kooxdiisu hanatay koobka UEFA Champions League finalkii ka dhacay caasimadda Cardiff. Balse joornaalka Daily Mirror ayaa sheegaya inuu Todobaadyo ka hor ku wargeliyey halyeeyga reer Scotland inuu ka tegi doono Real Madrid.
Waxyaabaha uu ka carooday Ronaldo waxaa ka mid ah inuu dareemay in aysan jecelyn Real Madrid, gaar ahaan taageereyaasha kooxdiisa oo dhowr jeer ku oriyey isaga inkastoo uu goolal natiijooyin usoo xareeyey u dhaliyey kooxdiisa Los Blancos.
Waana sababta uu ugu sheegay tababare Ferguson inuu u xiisay garoonka Old Trafford iyo taageereyaashii Manchester United ee jeclaa intii lagu jiray lixdii sanno ee uu kooxdaan kusoo qarash gareeyey. 32 sanno jirkaan ayaana jeclaan lahaa inuu kusoo laabto Man United.
C.ronaldo oo 6 isbuuc kahor Sir Alex ku sir qarsaday inuu ka tegayo Madrid added by Mohamed Abdulle Hassan on June 18, 2017